Wasiirka Maaliyadda oo ka qeyb galay shir looga hadlayay halka uu marayo dhaqaalaha dalka “SAWIRRO” | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Wasiirka Maaliyadda oo ka qeyb galay shir looga hadlayay halka uu marayo dhaqaalaha dalka “SAWIRRO”
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa Aaladda fogaan aragga uga qeyb galay shirka sanadlaha ah ee Bankiga Adduunka oo looga hadlayay halka uu marayo dhaqaalaha Soomaaliya.
Wasiir Beyle ayaa yiri “Waxaa aan ka qeybgalay shirka sanadlaha Bangiga Aduunka oo Ajandihiisu uu ahaa “halka uu marayo dhaqaalaha Soomaaliya” (Somalia Economic Update) oo sanadkaan aan diiradda ku saarnay saameynta dhaqaale ee Coronavirus”.
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa xusay in dib-u-habeynta iyo hufnaanta Maaliyadda Soomaaliya ay horseeday in Caalamku uu Soomaaliya garab istaago xiligaan adag ee lagu jiro hoos-u-dhaca dhaqaale.
“Dowladda Soomaaliya waxaa ka go’an in ay xoojiso isbadalka iyo Hufnaanta Maaliyadda Soomaaliya”. Ayuu hadalkiisa ku soo gabo gabeeyay Wasiir Beyle.
Wasiirka Maaliyadda oo ka qeyb galay shir looga hadlayay halka uu marayo dhaqaalaha dalka “SAWIRRO” was last modified: October 29th, 2020 by Admin
Dowladda Somalia oo war kasoo saartay ku xadgudubka Madaxweynaha Faransiiska ee Diinta Islaamka
Akhriso:-Maxkamadda Gobolka Nugaal oo xabsiga ka siideysay weriye Maxamed Siciid Yusuf
Goobaha Biyo fariisinka Dhuusamareeb oo dib-u-dayactir lagu bilaabay (Sawirro)